Cybersecurity: Hardware kuve yakachengeteka zvakanyanya | Linux Addicts
Isu takajaira kutaura nezve software-yakavakirwa kuchengetedza mhinduro, senge antivirus, firewall, IDS, encryption zvirongwa, 2FA, nezvimwe. Nekudaro, kune vamwe vashandisi, iyo hardware-based security iyo yakati wandei mumumvuri, zvisinei nekuti ivo vanogona kuve vane simba uye nyore kushandisa mhinduro mune dzimwe nguva.
Ndicho chikonzero ndakatsaurira chinyorwa ichi kunyanya kune ipa mhinduro idzi Hardware yekuchengetedza yaunogona kushandisa kumba kana mukambani:
Chinyorwa ichi chichava mhinduro yakanamirwa nemaperipherals uye zvishandiso (HSM), kwete yakavakirwa-mukati hardware mhinduro, senge TEE, TPM 2.0, zvakabatanidzwa zvigunwe zvigunwe zvinonzwa, nezvimwe.
1 U2F makiyi
2 hardware firewall
3 VPN Router uye VPN Bhokisi
4 encryption hardware
5 PKI token hardware
6 SSL/TLS Accelerator
7 Chengetedza hardware yekubhadhara system
8 Wallet kana chikwama che cryptocurrencies
9 Biometric sensors
10 Kensington kukiya uye zvakafanana
ari U2F makiyi iwo akachipa, uye imhando yehardware-yakavakirwa kaviri authentication system. Kuti ushandise iyi USB mudziyo, zvese zvaunofanirwa kuita ndeye kuibatanidza kuPC yako sezvaungaite pendrive, kekutanga chete iyo inoburitsa nhamba isina kujairika kuti ibudise akasiyana hashes ayo achashandiswa kupinda kune akabatana mapuratifomu. kana masevhisi.
Paunenge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge richinge rwakapinda kune iyo sevhisi, chaunofanirwa kuita kubaya kiyi ye USB muchiteshi uye kumirira iyo. browser inozviziva uye inotarisa. Nenzira iyi, vamwe vanhu vasina mudziyo uyu havazokwanisa kuwana account yako kunyangwe vachiziva password.
Makiyi aya anowanzo enderana nemabhurawuza makuru ewebhu, akadai seMozilla Firefox, Google Chrome, Opera, nezvimwewo, pamwe nemamwe masevhisi anozivikanwa, akadai seGoogle (GMAIL, Docs, Adsense,…), Dropbox, GitHub, Facebook, nezvimwe.
Kana iwe ukashinga kutenga chero yeaya makiyi e USB, heano mamwe recommendations (zvakakosha kuti vave nechitupa cheFIDO2):
Yubico Chengetedzo Kiyi NFC -...
Un firewall, kana firewall, inzira yekudzivirira inovharira isina kutenderwa network kupinda, kana inobvumira kutaurirana kwakatenderwa nemushandisi kana sisitimu maneja. Zvakanaka, kuwedzera kune izvo zvakavakirwa pasoftware, kune zvakare izvo zvakavakirwa pane Hardware.
Midziyo iyi inogona kunakidza kumakambani nemaseva, kukwanisa kuzvigadzirisa nenzira yakafanana kune router, kubva kune web interface uchishandisa browser. Mukuwedzera, kuiswa pakati peInternet uye router, zvose zvigadziri zvakabatanidzwa kune router yakati zvichadzivirirwa, pasina kugadzirisa imwe neimwe.
Midziyo iyi inogona kuwanikwa mune imwe compact fomu, yakafanana nerouter, yeimba, kana sevha racks. Vamwe recommendations Ndizvo:
Ye server (rack):
VPN Router uye VPN Bhokisi
Sezvaunoziva, imwe VPN (Virtual Private Network) inokutendera kuti ugadzire chiteshi chakavharidzirwa kuti uongorore paInternet zvakachengeteka. Pamusoro pezvo, zvinodzivirira data rako rekubhurawuza kuti riwanikwe neISP, uchakwanisa kuwana zvakavharika munzvimbo yako nekushandura IP kune imwe nyika, zvinovandudza kusazivikanwa kwako, nezvimwe. Mazhinji eaya masevhisi anogona kushandiswa kuburikidza nevatengi maapplication, zvisinei, maapplication aya anofanirwa kuisirwa pane imwe neimwe yemidziyo yaunobatanidza kunetiweki kuitira kuti ese ari pasi pekuchengetedzwa kweVPN.
Akanakisa VPN masevhisi
Imwe mhinduro ndeye kushandisa a vpn router/bhokisi iyo inokutendera kuti ugadzirise masevhisi aya (ExpressVPN, NordVPN, VyperVPN, CyberGhost, Surfshark, IPVanish...) uye nekudaro zvese zvishandiso zvaunobatanidza nazvo zvichachengetedzwa (nharembozha, smart TV, consoles, PC, IoT, nezvimwe. ) Kunyangwe pakange pasina mutengi app yepuratifomu iyoyo.
Vamwe router mazano zvakanaka kushandisa neVPN:
Linksys WLAN router...
Shellfire ine zvakare vpn bhokisi, izvo zvinongoitika uye zvakagadziridzwa otomatiki kuita kuti zvinhu zvive nyore kune vasiri tekinoroji vashandisi:
Shellfire Bhokisi Router...
El kunyorera kazhinji ibasa rakati "rinorema" kune Hardware. Nekudaro, kune Hardware encryption makadhi kana zvishandiso zvinobatsira software. Aya masisitimu anoita yakazvitsaurira processor yeizvi, inogona kuve mukana. Kune mamwe akavakirwa pamachipisi eARM, pax86, zvakare muPCI kadhi fomati, makiyi e USB encrypt data, nezvimwe.
Dzimwe dzemhinduro dzinoshanda dzekuva neyako encrypted data are the USB makiyi uye ekunze hard drives vane encryption system yakavakirwa-mukati. pano unogona kuwana mamwe mazano akadai se:
SanDisk Yakanyanya SSD ...
Lexar Flash Drive...
Newewo une Hardware Encrypted NAS inosanganisirwa, kuve neyako "gore" yakavanzika uye yakachengeteka, senge:
Synology DS220+ 6GB NAS...
QNAP TS-131P - Sevha...
PKI token hardware
ari PKI tokens iwo midziyo yehardware inochengeta makiyi akavanzika uye zvitupa zvedhijitari zvakachengeteka. Paunenge uchida encrypt, decrypt, kana kusaina kune imwe mhando yebasa, maitiro, nezvimwe, unogona kushandisa izvi zvishandiso zvakachengeteka.
Mumusika iwe unogona kuwana akawanda emhinduro idzi, se Thales Boka, macro security, avo microcosm, Etc.
Unewo zvimwe zvaunazvo SmartCard kana smart kadhi kuverenga, pamwe neyemagetsi DNI kuita online transactions. Zvimwe zvezvishandiso izvi zvinokurudzirwa ndezvi:
Sveon SCT022M - Muverengi...
Tooq TQR-210W - Muverengi...
Woxter Dni Reader Combo -...
ari hardware SSL/TSL accelerators Iwo maturusi anopawo kuchengetedzwa, uye kuti iwe unogona kuwana mune akasiyana mafomati, senge PCI ekuwedzera makadhi, mukuwedzera pakuiswa mumaraki. Nzira yekuburitsa iyo CPU kubva pabasa iri, sezvo ichi chimwe chikamu chichakumikidzwa kwachiri. Nekudaro, masisitimu aya haashandiswe mumba kana bhizinesi diki, asi pamaseva.
Chengetedza hardware yekubhadhara system
Izvi zvirongwa zvekubhadhara zvakachengeteka nehardware havaite zvine musoro kumba kana, asi vanoitira mamwe masangano, makambani, nezvimwe. Aya masisitimu eHSM anowedzera kuchengetedza uye anodzivirira-anodzivirira zvishandiso zvinogona kushandiswa muzvitoro zvebhangi indasitiri. Nekudaro, inopa yakakwira mazinga ekudzivirira makiyi encryption, mutengi maPIN anoshandiswa mumagineti mitsetse makadhi uye EMV chip (kana yakafanana) kuburitswa, nezvimwe. Vamwe vapeji verudzi urwu rwemhinduro ndivo Thales, PayCore, masevhisi akadai MyHMS, Etc.
Wallet kana chikwama che cryptocurrencies
chikwama, kana portfolio, wallet, virtual wallet, kana chero chaunoda kuidaidza, isystem yekuchengeta nekugadzirisa zvinhu zvako mucryptocurrencies. Inogona kuitwa nesoftware kana zvakare nehardware, yakagadzirirwa chete kuchengetedza iyo yeruzhinji uye yakavanzika makiyi e cryptocurrencies yako.
Vamwe kutenga mazano Ndizvo:
Crypto chikwama che...
Kune mhando dzinoverengeka dze biometric sensor kuvandudza kuchengetedzwa kwehardware, uye izvo zvinogona kutsiva nzira dzekuwana nezvinojairwa (zita remushandisi uye password) nekucherechedzwa kweyakasarudzika biometric paramita mumunhu wega. Somuenzaniso, pane zvimwe zvakafanana:
Vanogona kushandiswa akasiyana mafomu, kubva pakuwana sevhisi kana kupinda mukati, kusvika pakuvhura magonhi, nezvimwe. Mune mamwe mazwi, ivo havangogone kukubatsira iwe kuvandudza kuchengetedzwa kwedhijitari, asiwo padanho remuviri kana perimita. Mimwe michina ingangokufarira ndeiyi:
Lenovo, 4Y50Q64661 Mbeva...
Mini Fingerprint reader...
ANVIZ P7 Kupinda Kudzora,...
Kensington kukiya uye zvakafanana
Vakakurumbira kensington lock Icho chinongedzo chekuchengetedza chinogona kupinzwa mugomba diki rinosanganisirwa mune mamwe mamodheru emalaptops uye ane chinangwa chekudzivirira kubiwa kwemidziyo iyi. Inoshandiswa kumisa kukiya uye yakagadzirwa uye yakagadzirwa neKensington Computer Zvigadzirwa. Parizvino, kune mamwe mabhureki anopa mhinduro dzakafanana.
Zvishoma nezvishoma, dzimwe mhinduro dzave kuoneka kune mimwe michina, kubva padesktop PC kuenda kune nharembozha senge mahwendefa kana mafoni.
También existen zvimwe zvakawanda zvinogadzirisa kuvandudza kuchengetedzwa kwehardware, zvimwe zvisiri pasina kupokana, zvimwe zvakachipa uye zvinoshanda. Kubva pane akajairwa mavhavha emakamera ekumberi (webcam yelaptop, AIO, nharembozha), kuti vasakutarise pasina mvumo yako, kune enhema data jenareta senge charger. Madhaka.
KIWI dhizaini Kavha Webcam 6...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Cybersecurity: Hardware kuve yakachengeteka zvakanyanya